Ịdọ aka ná ntị ngwa ngwa sitere n'aka odeakwụkwọ ukwu UNWTO bụ Francesco Frangialli
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ịdọ aka ná ntị ngwa ngwa sitere n'aka odeakwụkwọ ukwu UNWTO bụ Francesco Frangialli
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • WTN
Ma onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO Francesco Frangialli na Dr. Taleb Rifai ezuola.
Akwụkwọ ozi pen ọhụrụ nke onye bụbu odeakwụkwọ ukwu na-ekwu maka ịghọ aghụghọ ule, ikpe Stalinist na ebe ọbụna ikpe ziri ezi na-aghọ ikpe na-ezighị ezi.
Francesco Frangialli, onye Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO na onye bụbu onye isi ọgbakọ zara Akwụkwọ ozi Zurab Pololikashvili degaara steeti ndị otu niile si izu gara aga.
Francesco Frangialli jere ozi dị ka odeakwụkwọ ukwu nke United Nations World Tourism Organisation site na 1997 ruo 2009 wee gụta dị ka otu n'ime ndị a kacha asọpụrụ na njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Ihe ndị bụ isi Frangialli rụpụtara dị ka onye odeakwụkwọ ukwu gụnyere “ịmepụta usoro mba ụwa nabatara iji tụọ mmetụta na njem nlegharị anya na akụ na ụba mba yana nnabata nke Global Code of Ethics for Tourism iji kwalite njem nlegharị anya nwere ezi uche na nke na-adigide.
Nbibi nke ụkpụrụ omume a bụ ihe na-akpalite onye bụbu onye isi UNWTO ikwu okwu ike n'ụdị akwụkwọ ozi mepere emepe megide onye ndu otu ugbu a.
Mazị Francesco Frangialli gwara Zurab Pololikashvili na nzaghachi leta ya mepere emepe:
Ezigbo ndị nnọchiteanya nke mba ndị so na World Tourism Organisation,
Akwụkwọ ozi mepere emepe nke mbụ: WTN maka ịdị mma na ntuli aka UNWTO
Akwụkwọ ozi mepere emepe nke abụọ nye mba ndị otu UNWTO na akụkọ sitere n'aka onye ọrụ ụkpụrụ omume na omenala njikwa na omume na nzukọ a.
Ana m edegara gị akwụkwọ ozi n'ọrụ m dị ka onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation. Maka ndị na-amaghị oge tupu akụkọ ihe mere eme, abụ m osote odeakwụkwọ ukwu site na 1990 ruo 1996, odeakwụkwọ ukwu. oge adim na 1996-1997, na odeakwụkwọ ukwu site na 1998 ruo 2009. N'ime oge 2001-2003, eduga m ngbanwe nke Ụlọ Ọrụ anyị ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ pụrụ iche nke United Nations.
N'ịbụ onye na-elekọta ndị odeakwụkwọ na-amanye, site n'echiche m, ụfọdụ njide onwe onye, ​​karịsịa n'oge nzukọ a na-etinye aka na ntuli aka nke ịhọpụta odeakwụkwọ ukwu ya maka afọ anọ na-abịa. N’ihi nke a, n’agbanyeghị na m na-ekerịta ọtụtụ echiche ndị ekwuru n’edemede a, abịanyeghị m aka n’akwụkwọ ozi ahụ mepere emepe nke otu ndị isi n’ọkwa ozi zitere gị.
Ma akwụkwọ ozi ahụ na-adịbeghị anya kesara na nzaghachi nye ndị otu site n'aka odeakwụkwọ ukwu nke na-arụ ọrụ na ebubo na-ezighị ezi dị na ya na-amanye m imeghachi omume n'ihu ọha na isi ihe abụọ.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ọ dabere na oge m na-elekọta, enweghị m ike ịnakwere nkwupụta ahụ "Emere mmebi iwu na ọtụtụ mba ndị dị mkpa wepụrụ, ọnọdụ nke nzukọ a na-agbalị imezi kemgbe ahụ."
Mgbe ị na-ezo aka "ihe na-ezighi ezi", mmadụ enweghị ike ịnọ na-edoghị anya. Ekwesịrị ịchọpụta ihe na-ezighi ezi ọ bụla. A ghaghị ikwu mgbe ọ mere, onye kpatara ya, na obodo nke hapụrụ n'ihi ya.
Ọ bụ kpọmkwem ihe a na-akpọ ikpe Stalinist
Mgbe m bụ odeakwụkwọ ukwu, ọ nweghị mba dị mkpa hapụrụ Òtù ahụ.
Mgbe m sonyeere WTO dị ka onye na-eto eto osote onye odeakwụkwọ ukwu nye Antonio Enriquez Savignac, nzukọ ahụ nwere nnukwu ọgba aghara. Ọtụtụ mba ndị dị na Central America, dị ka Costa Rica na Honduras, na n'Eshia-Pacific, dị ka Philippines, Thailand, Malaysia, na Australia, apụọla; United States ga-eso ngwa ngwa. Mụ na onye bu ụzọ m, na, mgbe e mesịrị, n'iwu onwe m, anyị nwere ihe ịga nke ọma n'ịgbanwe usoro ahụ.
Mgbe m hapụrụ UNWTO na 2009, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị otu 150. Mba Eshia niile ndị gabuburu abanyela, na ndị ọhụrụ n'akụkụ ụwa a, nke dị mkpa maka ụlọ ọrụ njem, abịala. Mba ndị dị mkpa dị ka Saudi Arabia, Croatia, Serbia, Ukraine, Kazakhstan, na South-Africa, na ọtụtụ ndị ọzọ, abanyela. Latvia, Lithuania, United Kingdom, Norway, Australia, na Canada bụ ndị otu.
Enwetala m akwụkwọ ozi sitere n'aka gọọmenti New Zealand na-ekwupụta nzube ya ịbanye. Onye ode akwụkwọ azụmahịa nke United States akwadola otu mmegharị ahụ nye Onye isi ala ya. N'ịgụ akwụkwọ ozi odeakwụkwọ ukwu, enwere m obi ụtọ ịmụta na ndị nlekọta ugbu a na-arụ ọrụ iji "dozie" enweghị isi obodo ụfọdụ. Achọpụtara m na ọ na-elekọta ya afọ anọ na ọ dịghị ihe ọ rụpụtara.
Ekele maka onyinye na-abịa site na mba ndị a "ọgaranya", kamakwa iji nlezianya nyochaa njikwa, na njedebe siri ike nke ụgwọ ọrụ ndị ọrụ, nke na-efunahụ anya, UNWTO nwere obi ụtọ n'oge m hapụrụ, nnukwu ego na-enye ohere. iji kwado ọtụtụ mmemme nke mmemme maka oge mmefu ego na-abịa 2010-2011. Ọ bụrụ na "nnukwu ụkọ ego” dị adị ma ọ bụ dị taa, ọ pụtaghị n'oge a.
Nke abuo, enweghị m ike ikwenye n'echiche ahụ na, ebe ọ bụ na Council kwadoro ya, a na-ekpebi usoro nke nhọpụta onye ga-abụ onye nnọchiteanya nke odeakwụkwọ ukwu ma tinye ya n'ụzọ ziri ezi, nke doro anya na nke onye kwuo uche ya. Ọ bụghị ụdị ihe ahụ.
Tinyere onye nọchiri m dị ka odeakwụkwọ ukwu, Dr. Taleb Rifai, na-enweghị itinye aka n'ụzọ ọ bụla na nhọrọ a ga-eme, anyị dọrọ aka ná ntị n'oge kwesịrị ekwesị nke ihe ize ndụ dị n'ime usoro nhazi nke onye odeakwụkwọ ukwu kwadoro ma nabata ya. Council Council na nnọkọ nke 112 ya na Tbilisi. A sị na a nụrịrị olu anyị, obi abụọ na-emetụta ugbu a na usoro ntuli aka dum agaghị adị.
Nzukọ na obodo nke ndị isi n'oge ahụ mgbe ọtụtụ ndị otu Council enweghị ike ịga njem n'ihi ọrịa na-efe efe na mgbe ọtụtụ n'ime ha nọchitere anya ndị nnọchianya ha na Georgia, gosipụtara n'ụzọ doro anya mkparị.
Kansụl ahụ kwadoro usoro iheomume nke mere ka ọ ghara ikwe omume ndị nwere ike ikwupụta onwe ha, nweta nkwado site n'aka gọọmentị ha, ịkọwapụta na kesaa mmemme ha, na ịme mkpọsa nke ọma. Oge mmachi a na-ezighi ezi, yana ọnọdụ ịdị ọcha na-adị na njedebe nke afọ, gbochiri ndị ga-ekwe omume ịga nleta na mba ịtụ vootu. Inwe ntuli aka emere na Madrid na-akwadokwa odeakwụkwọ ukwu nke na-apụ apụ, dị ka onye bụbu onye nnọchi anya Spain. Ihe ndị a niile jikọtara ọnụ nyere ndị nọ n'ọchịchị ohere asọmpi na-ezighi ezi karịa ndị asọmpi enwere ike.
Ngosipụta nke oge dị mkpirikpi na-akwa emo n'etiti nnọkọ abụọ nke Council bụ inwe nnọkọ nke 113 na Madrid tinyere ihe ngosi njem nlegharị anya dị mkpa na Spain, FITUR. Nke a bụ naanị na-ezoro ndị otu eziokwu eziokwu, ebe ọ bụ na o doro anya site na mmalite na, n'ihi ọrịa na-efe efe, FITUR agaghị ewere ọnọdụ dịka e mere atụmatụ na Jenụwarị. Dị ka e kwuru na akwụkwọ ozi m cosigned na Taleb Rifai, ike ịdị ọcha gburugburu ebe obibi kwesịrị iduga na-abụghị ngwọta: jide Council nnọkọ dị ka mbubreyo dị ka o kwere, na springtime dị ka ọ na-adị, ma ọ bụ ọbụna ná mmalite nke General Assembly.
N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ịga n'ihu ụbọchị bụ nanị ịghọ aghụghọ ule.
Onye odeakwụkwọ ukwu na-apụ apụ na-arụrịta ụka n'akwụkwọ ozi ya na usoro a gbasoro bụ nke iwu kwadoro, na ọ na-ada "n'ime purview nke Executive Council n'onwe ya".
Nke a ziri ezi. Mana iwu kwadoro ezughị. N'ịgbanwe usoro a, ị nwere ike ịbụ ma iwu na omume rụrụ arụ.
Usoro ntuli aka nwere ike ịbụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ iwu, mana n'otu oge ahụ ezighi ezi na enweghị nha. Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụghị ụkpụrụ omume.
Dị ka Sophocles dere:
"Ọ dị ihe karịrị nke ọbụna ikpe ziri ezi na-aghọ ajọ omume".
Enwere m olileanya na Nzukọ Ezumezu, n'ikike nke "akụkụ kachasị elu"nke UNWTO, ga-eme ihe dị mkpa iji hụ na ntuli aka ziri ezi na Madrid na ịlaghachi na njikwa ọma nke Òtù ahụ.
A na m arịọ gị niile ọnụnọ na-amị mkpụrụ na nke obi ụtọ na Spain.
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO
Apple kwụsịrị ire Turkey ọhụrụ ka ego Turkey dara